သမီးလေးက သူမကို ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အံ့ဩပြီး ဝမ်းနည်းရမလား ငိုရမလားဖြစ်သွားတဲ့ မေမေအေသင်ချိုဆွေ – Nyi Ma Lay
သမီးလေးက သူမကို ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အံ့ဩပြီး ဝမ်းနည်းရမလား ငိုရမလားဖြစ်သွားတဲ့ မေမေအေသင်ချိုဆွေ
အဆိုတော် တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် လည်းဖြစ်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ ကတော့ အမြို့မြို့ အနယ်နယ်မှာ အားပေးသူ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိပြီးသား အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင် တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်သလို တစ်ဖက်မှာ လည်း သမီးလေး Ivy ရဲ့ မိခင် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေက ပရိသတ်တွေနဲ့ မိသားစု အကြားမှာ အချိန်တွေကို သင့်တင့် မျှတအောင် ခွဲဝေ လှုပ်ရှားနေသူ တစ်ယောက်ဆို လည်း မမှားပါဘူး။
ပရိသတ် တွေကလည်း အေသင်ကို ချစ်သလို အေသင့်ရဲ့ သမီးလေး Ivy ကို အရမ်း ချစ်တာမို့ အေသင်ချိုဆွေက Ivy လေးရဲ့ ပုံရိပ် တွေကို မကြာခဏ ဆိုသလို မျှဝေပေး လျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မှာလည်း အေသင်ချိုဆွေ က သူမတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က ဗီဒီယိုလေးကို Share ပြီး “မေမေ: အဲ့ကလေးလေး ပြန်လိုချင်တယ်😘 ဗီးဗီး : ဗီးဗီး လည်း အဲ့ မေမေ ကို ပြန် လိုချင်တယ်။ မေမေ: ဘာလို့လဲ? ဗီးဗီး : အဲ့ထဲက မေမေ က ချစ်စရာလေး အခုမေမေက ချစ်ဖို့ကောင်းတော့ဘူး။ မေမေ : အေးပါဟယ် 😅😅” ဆိုပြီး သမီးလေးရဲ့ သွက် လက် ချက်ချ ာပုံကို ပြောလာပါတယ်။
Ivy လေးကတော့ မျက်နှာလေး ချစ်စရာကောင်း ရုံသာမက စကားလေး ကလည်း တတ်ပြီး အရမ်း အသည်းယား ဖို့ကောင်း တာပဲနော်။ ပရိသတ် ကြီးလည်း Ivy လေးရဲ့ စကားကြွယ်ပုံကိုကြည့်ပြီး သဘောကျ နေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္သလို သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္တဲ့ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ကေတာ့ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္မွာ အားေပးသူ ပရိသတ္ အခိုင္အမာ ရရွိၿပီးသား အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ တဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သလို တစ္ဖက္မွာ လည္း သမီးေလး Ivy ရဲ့ မိခင္ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တဲ့ ေအသင္ခ်ိဳေဆြက ပရိသတ္ေတြနဲ႔ မိသားစု အၾကားမွာ အခ်ိန္ေတြကို သင့္တင့္ မၽွတေအာင္ ခြဲေဝ လႈပ္ရွားေနသူ တစ္ေယာက္ဆို လည္း မမွားပါဘူး။
ပရိသတ္ ေတြကလည္း ေအသင္ကို ခ်စ္သလို ေအသင့္ရဲ့ သမီးေလး Ivy ကို အရမ္း ခ်စ္တာမို႔ ေအသင္ခ်ိဳေဆြက Ivy ေလးရဲ့ ပုံရိပ္ ေတြကို မၾကာခဏ ဆိုသလို မၽွေဝေပး လ်က္ရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ မွာလည္း ေအသင္ခ်ိဳေဆြ က သူမတို႔ သားအမိႏွစ္ေယာက္ရဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္က ဗီဒီယိုေလးကို Share ၿပီး “ေမေမ: အဲ့ကေလးေလး ျပန္လိုခ်င္တယ္😘 ဗီးဗီး : ဗီးဗီး လည္း အဲ့ ေမေမ ကို ျပန္ လိုခ်င္တယ္။ ေမေမ: ဘာလို႔လဲ? ဗီးဗီး : အဲ့ထဲက ေမေမ က ခ်စ္စရာေလး အခုေမေမက ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေတာ့ဘူး။ ေမေမ : ေအးပါဟယ္ 😅😅” ဆိုၿပီး သမီးေလးရဲ့ သြက္ လက္ ခ်က္ခ် ာပုံကို ေျပာလာပါတယ္။
Ivy ေလးကေတာ့ မ်က္ႏွာေလး ခ်စ္စရာေကာင္း ႐ုံသာမက စကားေလး ကလည္း တတ္ၿပီး အရမ္း အသည္းယား ဖို႔ေကာင္း တာပဲေနာ္။ ပရိသတ္ ႀကီးလည္း Ivy ေလးရဲ့ စကားႂကြယ္ပုံကိုၾကည့္ၿပီး သေဘာက် ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ သွားခဲ့ရပေမဲ့ ဝေဖန်နေသူတစ်ချို့အားသူ့ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
Next post ကိုးရီးယားဆန်ဆန်နန်းတွင်းဝတ်စုံလေးနဲ့ ပရိသတ်အမြင်ဆန်းအောင်ထူးခြားတဲ့ အလှပုံလေးတွေချပြလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ